(Leonardo da Vinci မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
This ဆောင်းပါး may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this ဆောင်းပါး if you can. The talk page may contain suggestions. (၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈)
လီယိုနာဒို ဒီ ဆာ ပီရို ဒါဗင်ချီ ( အီတာလျံ: Leonardo di ser Piero da Vinci; အီတလီ: [leoˈnardo da (v)ˈvintʃi] ( နားဆင်); ၁၅ ဧပြီ ၁၄၅၂ – ၂ မေ ၁၅၁၉) သည် အီတလီလူမျိုး စွယ်စုံပညာရှင်၊ ပန်းချီဆွဲသူ၊ ပန်းပုထုသူ၊ ဗိသုကာပညာရှင်၊ တေးဂီတသမား၊ သိပ္ပံပညာရှင်၊ သင်္ချာပညာရှင်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ တီထွင်သူ၊ ခန္ဓာဗေဒပညာရှင်၊ ဘူမိဗေဒပညာရှင်၊ မြေပုံဆွဲသူ၊ ရုက္ခဗေဒပညာရှင် နှင့်စာရေးဆရာဖြစ်သည်။လီယိုနာဒိုကို လူမှုရေးဘာသာရပ်များတွင် ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်သော ပါရမီအခံရှိသည့် ရှေးဦးမူလပုံအဖြစ် ရံဖန်ရံခါ ဖေါ်ပြခဲ့ကြသည်။ သူ၏ငြိမ်းသတ်၍မရနိုင်သည့် သိလိုစိတ်ပြင်းပြမှုသည် သူ၏တီထွင်မှုစွမ်းအား တစ်ခုတည်းနှင့်သာ ညီမျှခဲ့သည်။သူ့ကို ထာဝစဉ် အထင်ပေါ်အကျော်ကြားဆုံးသော ပန်းချီဆရာကြီးများထဲမှတစ်ဦးအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိထားကြပြီး၊ အမှန်တကယ်ပင်ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် အမြဲတမ်းရှင်သန်နေမည့် အထက်မြက်ဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ&oldid=473043" မှ ရယူရန်